Sri Lanka: Fanafihana maro hafa eo am-pandrosoana, tsy misy Internet, nandidy ny curfew: Manolotra fanohanana sy fanambarana ny vondrona eropeana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Sri Lanka: Fanafihana maro hafa eo am-pandrosoana, tsy misy Internet, nandidy ny curfew: Manolotra fanohanana sy fanambarana ny vondrona eropeana
Ny filoha lefitry ny solontena ambony an'ny vondrona eropeana Federica Mogherini dia namoaka fanambarana taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tany Sri Lanka androany maraina
Tamin'ny faran'ny alahady dia nahatratra 215 ny maty ary 500 no naratra.
Nosamborin'ny Polisy Sri Lanka ny olona ary nilaza ny sampam-pitsikilovana Sri Lanka fa efa nanana porofon'ny fanafihana mety hitranga alohan'ny nitrangan'izany.
Tompon'andraikitra amin'ny hotely ao amin'ny Cinnamon Grand, akaikin'ny trano ofisialin'ny praiminisitra, no nilaza fa namaky trano fisakafoanana io fipoahana io ary nahafaty olona iray farafaharatsiny.
Olona 160 farafahakeliny no maty androany tany Sri Lanka, ary 35 amin'ireo no vahiny tsy voamarina.
Nisy fipoahana fahafito koa tao amin'ny trano fandraisam-bahiny akaikin'ny zoo ao Dehiwala, atsimon'i Colombo, izay maty roa. Nakatona ny zoo. Napetraka ny curfew nanomboka tamin'ny 18:00 ka hatramin'ny 06:00 ora teo an-toerana (12: 30-00: 30 GMT).
Sri Lanka dia nanidy ny serasera sy serivisy fandefasan-kafatra hafatra ao amin'ny firenena
Na dia eo aza izany dia tonga ny vaovao amin'ny fipoahana fahavalo sy fifanakalozana basy tany amin'ny distrikan'i Colombo any Dematagoda, saingy mbola tsy voamarina izany.
Napetraka ny curfew nanomboka tamin'ny 18:00 ka hatramin'ny 06:00 ora teo an-toerana (12: 30-00: 30 GMT).
Andianà fanafihana mitambatra no tonga tany amin'ireo fiangonana sy trano fandraisam-bahiny tany Sri Lanka io maraina io, izay niteraka faharavana. Miaraka amin'ny lehilahy, vehivavy ary ankizy, avy amin'ny lafim-piainana rehetra sy avy amin'ny firenena samy hafa eo amin'ireo iharan'izany dia tena andro mampalahelo ho an'ny firenena sy an'izao tontolo izao.
Ny Vondrona Eropeana dia manao fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy sakaizan'ireo izay novonoina ary maniry ny fanarenana haingana an'ireo maratra marobe.
Ny Alahadin'ny Paska dia fotoana manokana ho an'ny Kristiana manerantany. Fotoana tokony hisaorana, noho ny fahatsiarovana, fankalazana ary vavaka am-pilaminana. Ny herisetra toy izany amin'izao Andro Masina izao dia fihetsika mahery setra amin'ny finoana sy antokom-pinoana rehetra ary amin'ireo rehetra manome lanja ny fahalalahan'ny fivavahana sy ny safidy hivavaka.
Ny Vondrona Eropeana dia miombon-kevitra amin'ny vahoaka ao Sri Lanka sy ny manampahefana Sri Lankan amin'izao fotoan-tsarotra izao. Vonona hanome fanampiana ihany koa ny Vondrona eropeana.
Shangri La Hotel Colombo Chef Veteran dia namono olona 160 tamina fanafihana fampihorohoroana 6 tany Sri Lanka